Talantalana HEGERLS talantalana
HEGERLS mpihazakazaka radio
Fampielezam-peo amin'ny radio HEGERLS
HEGERLS fametahana cantilever
HEGERLS mitondra fiara amin'ny rafitra fitifirana
Fonosana mezzanine fitehirizam-bokin'ny HEGERLS
HEGERLS manosika ny rafitra fametahana indray
Fandefasana finday HEGERLS
HEGERLS Fialana andraikitra mavesatra
Rafitra fitetezana vy mavesatra
Rafitra fitahirizana indostrialy
Rafitra fitehirizana shuttle avo lenta
MOQ 1 napetraka
Toerana niaviany Hebei, Sina
Fotoana fandefasana 90 andro
Fepetra fandoavana L / C, D / A, T / T, Western Union
HEGERLS fametahana paleta
HEGERLS Selective Pallet Racking no vahaolana tsara indrindra ho an'ireo trano fitahirizana entana izay ilana hitazomana lahatsoratra maro karazana ao anaty paleta. Manome fidirana mivantana amin'ny paleta rehetra hahazoana fidirana 100% sy fihodinan'ny tahiry tsara izany.
Ny paleta dia azo jerena, ampidirina ary hafindra tsirairay manome fikirakirana haingana ny entana vita amin'ny pallet. Manome fanamainana mora sy mahazaka haavon'ny paleta miovaova izy io.
HEGERLS paleta famonoana endri-javatra
◆ Rafitra fitehirizana avo lenta hitehirizana palety, fampiasana trano fitehirizana mahomby;
◆ Rafitra fidirana voalohany-farany-farany;
◆ Topy braced ambony sy miverina ampiasaina hanamboarana ny fonosana iray manontolo, hahatonga ny fonosana iray manontolo ho azo antoka sy azo antoka;
◆ Paleta ambaratonga voalohany azo apetraka amin'ny lalamby mpitari-dalana;
◆ Fifanentanana sy fahamoran'ny fametrahana, manatsara ny fampiasana ny habaka.
HEGERLS fametahana pallet famaritana
Famaritana boaty boaty
HEGERLS fonosana mavesatra entana 2021 3000kgs avo lenta isaky ny sosona dia misy talantalana vy
Manome HEGERLS fitoeram-baravarana mavesatra 2021 3000kgs avo lenta isaky ny sosona izahay, misy talantalana vy. Izahay dia manokan-tena amin'ny saha fitahirizana trano fitahirizana mandritra ny 25 taona. Manantena izahay fa ho mpiara-miasa maharitra any Shina.
1.Product fampidirana ny talantalana talantalana
Ny talantalana HEGERLS dia misy fefy, tohatra, fametahana vy. Ny halaliny dia mety 500mm, 600mm na namboarina. Ny talantalana lava dia mety indrindra amin'ny entan'ny tanana. Ny fandefasana ny ambaratonga tsirairay dia mety 300kgs, 500kgs na 800kgs mihoatra.
2. Parameteran'ny vokatra.
Endri-javatra sy fampiharana
3.1 Dingana famaritana tohatra
3.2 Famaritana marina
4.Production antsipirihany ny talantalana talantalana4.1Izy dia azo ampiasaina irery na ampiarahana malalaka amin'ny endrika rehetra sy amin'ny indostria rehetra. 4.2Ny halaliny dia mety ho 300mm, 500mm, 600mm na habe hafa.
4.3 ny fandefasana ny sosona tsirairay dia mety ho 300kgs, 500kgs, 800kgs, ny lanjany hafa mety ho takiana manokana.
4.4Ny haavon'ny dia mety ho 50mm.4Productions fanamarinana ny talantalana talantalana
5.1 izahay dia nandany ny taratasy fanamarinana SGS.BV, TUV ary mari-pahaizana momba ny kalitao ISO.
Ankoatr'izay, izahay koa dia nandalo ny taratasy fanamarinana momba ny fitantanana tontolo iainana, fitantanana fahasalamana sy fiarovana
5.2 akora matevina: vy mangatsiaka mihodina Q235B. na SS400 fenitra vy iraisam-pirenena
5.3. milina mihodina. Manana andalana miolaka 12 izahay, afaka mihodina habe samihafa.
5.4 Tsipika famonoana herinaratra. 500 metatra ny halavany ary ny marika ny basy famonoana herinaratra dia GEMA, izay malaza be eo amin'ny sehatry ny firakotra.
5,5 mitsidika ny mpanjifa. Ny toerana misy anay dia any amin'ny faritany hebei, akaikin'i Beijing sy Tianjin. Ny anaran'ny seranam-piaramanidintsika dia seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Shijiazhuang zhengding. Tongasoa eto izao ny fitsidihanao.
Fampirantiana 5.6. Isan-taona dia hanatrika fampirantiana canton sy foara Shanghai Cemat izahay.
6 Fanaterana. Fandefasana sy serivisy
6.1 fonosina sy fandefasana. Raha ny mahazatra, ny mitsangana dia ho feno fonosana plastika. Ary ny fantsom-pifamoivoizana dia hapetraka ao anaty paleta hazo.
6.2 Manome sary haingon-tsary sy sary misy vokany 3d izahay
F: Inona ny fiantohana kalitaon'ny vokatrao?
A: Ny garantie qualité anay dia 1 taona. Hanohy hanome ny serivisy ho an'ity ora ity izahay ary hanome ny vidin'ny kojakoja fanolanana ihany.
F: Inona ny fotoana itarihana?
A: Ho an'ny rafi-pitabatabana dia maharitra 30 andro izany. Ary ho an'ny fitaterana an-tsambo dia mila 60 andro amin'ny famokarana.
F: Azonao atao ve ny manome ny endrika famolavolana?
A: Eny, afaka manome malalaka ny famolavolana fisainana amin'ny Autocad na sary 3d izahay. Serivisy maimaimpoana ho anay izany.
F: Inona no loko mangatsiaka misy?
A: Raha ny mahazatra dia manana loko manga RAL5005 sy orange RAL2004 izahay. Ny loko koa azo namboarina. Azafady mba omeo anay ny nomeraonao.
Q ： ahoana ny fametrahana?
A: Hanome ny antsipirian'ny fametrahana antsipiriany izahay. Ho an'ny fametahana nentim-paharazana tsotra, ny mpiasa dia afaka nametraka azy io araka ny sary. Na raha tsy izany, ny injenieranay dia afaka mandeha any amin'ny tranokala mba hanome toromarika ny fametrahana ary ny mpividy dia handoa ny vidiny.
8. Vaovao farany
Ny fitaovana fototra an'ny automated warehouse-stacker
Ny crane stacking crane dia ny crane manokana novolavolaina niaraka tamin'ny fisehoan'ny trano fitehirizana telo refy, antsoina hoe stacker, dia fitaovana fampakarana sy fikirakirana tena lehibe ao amin'ny trano fanatobiana telo-habe, ary mariky ny toetra mampiavaka azy telo trano fitehirizam-bokatra. Ny tena tanjony dia ny mihazakazaka amin'ny làlambe amin'ny làlan'ny trano fitehirizana entana avo lenta mba hitahiry ny entana eo am-baravaran'ny lalana mankamin'ny fitoeran'entana; na ny famoahana ny entana ao amin'ny fitoeran'entan'ny entana ary hitaterana azy ho eo am-baravaran'ny arabe mba hamita ny asa fitahirizana entana.
Misy karazana crane stacker maro. Amin'ireo fampiharana trano fitehirizana telo-lehibe ankehitriny, ny tena mahazatra dia
1. Araka ny firafitra dia mizara ho tsanganana tokana sy firafitry ny tsanganana roa izy io
2. Araka ny fanasokajiana ny làlana mihazakazaka dia mizara ho karazana marindrano sy karazana miolakolaka izy io
Na inona na inona karazana crane stacker amin'ny ankapobeny dia miorina amin'ny mekanika mandeha marindrano, ny fiakarana mekanika, ny fantsom-pamokarana sy ny fork, ny rafitra ary ny fitaovana elektrika ary ireo faritra fototra hafa. Ny motera mandeha dia manosika ny kodiarana hihetsika mitsivalana amin'ny lalamby ambany amin'ny alàlan'ny vatan'ny mpamily, ny motera manainga dia mitondra ny seha-pitaterana hamindra mijidina amin'ny tadin'ny rojo / tariby / fehikibo, ary ireo forks eo amin'ny lampihazo dia manao hetsika teleskopika. Ny mpitady adiresy mandeha dia ampiasaina mifehy ny toeran'ny mpandeha mitsivalana ny stacker, ary atsangano ny mpitady adiresy hifehezana ny toerana fampiakarana ny lampihazo; amin'ny alàlan'ny fitadiavana adiresy sy fankatoavana photoelectric, ary ny fanovana ny laharan'ny fifandraisana, ny fanaraha-maso ny solosaina dia azo tanterahina, ary ny fanaraha-maso mandeha ho azy, semi-mandeha ho azy ary ny tanana dia azo tanterahina amin'ny alàlan'ny tontonana fanaraha-maso.
Amin'izao fotoana izao, ao amin'ny trano fanatobiana entana misy refy telo an'ny fireneko, ny stackers dia be mpampiasa amin'ny indostria toy ny fanamboarana milina, ny famokarana fiara, ny indostrian'ny lamba, ny lalamby, ny sigara, ary ny fanafody. Miaraka amin'ny fampivoarana ny famokarana indostrialy maoderina, ny teknolojian'ny vano mpitaingina làlana manara-penitra dia manatsara sy manatsara hatrany. Hatramin'ny 2017, Hegerls dia nahazo endrika vaovao sy patanty stacker vaovao. Nanohy namintina ny traikefa izy io ary nanolo-tena ho an'ny fampandrosoana sy ny fampiharana. Tena matotra tokoa izahay amin'ny fananganana trano fanatobiana entana misy refy telo ho an'ny vokatra vaovao miaraka amin'ny fiarovana sy filaminana!
Teo aloha: HEGERLS manosika ny rafitra fametahana indray
Manaraka: Warehouse Storage Heavy Duty Steel Pallet Racking System
Rafitra fanatobiana pallet
Warehouse Storage Heavy Duty Steel Pallet Racki ...
Toeram-pamokarana: 68 Shidai Road, Xinhe Industrial Park, faritany Hebei, Sina.